Wacom Bamboo Spark ukubuyekeza - Izindaba Rule
Wacom Bamboo Spark ukubuyekeza
I Wacom Bamboo Spark kuyinto izici ezimbalwa nje kude ukuzidela okukhulu. Umqondo uwukuthi umsindo - ukwenza emuva pad smart ukuze ukwazi ukusebenzisa noma isiphi iphepha.
uhlelo iphepha elisha Graphics tablet umenzi sika amathrekhi ipeni lakho imivimbo evamile A5 ephepheni kanye Imiphumela njengethuba isithombe, PDF, umbhalo noma ink digital, kodwa angeke umadanise izimbangi
Lesi sihloko osesikhundleni “Wacom Bamboo Ukubuyekeza Spark: ipeni nephepha namaqhinga digital” kwalotshwa Samuel Gibbs, ngoba theguardian.com ngoLwesihlanu 8th April 2016 06.00 UTC
I Wacom Bamboo Spark kuyinto mzamo lokuloba-umenzi wokuqala ukwenza hybrid iphepha incwajana ukuqopha ngokokudwebela yakho futhi doodles in ifomu digital.
Kungani lokuloba futhi ihluzo nomakhi tablet okwenza uhlelo ipeni? Ngoba iphepha uzizwa futhi siziphathe ngendlela ehlukile ingilazi isihenqo noma ebusweni isibhebhe abantu abaningi bakhetha it, kodwa usafuna ikhophi digital ngaphandle kokuba iphendukele scan akwazi ukuthola noma izithombe.
Abanye baye bazama ukwenza lokhu, kodwa Wacom is usebenzisa indlela ezithakazelisayo ehlukile ukuze izimbangi it. I Spark Bamboo izinto ezimbili kusala: a standard-looking obungangenhloko kakhanjana ipeni elinye smart okubekwa ephepheni evamile A5 ephepheni.
I ipeni oziphatha njengongqingili iyiphi obungangenhloko kakhanjana ipeni evamile; kungcono nje kancane mkhulu. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Ngokungafani the Livescribe Smartpen 3, akusikho ipeni noma iphepha lelo smart, kodwa pad ngaphansi leli phepha: it olunamagama scrawls yakho njengoba nemivimbo digital.
Isebenza uzingela ipeni ukunyakaza futhi luvelo lolulingene lwemibono ingcindezi ekhasini, izibeke inkumbulo futhi ewayisa nge Bluetooth lokusebenza Bamboo Spark-iOS noma smartphone noma ithebhulethi Android.
Wena wenze umsebenzi wakho ngepeni yakho ekhasini, hit inkinobho nesithombe ngedijithali kugcinelwe ngemva kwesikhashana. Khona ungakwazi vula ikhasi bese uphinde uqale. You Ungasebenzisa noma yisiphi pad A5 ukuthi akuyona aminyene kakhulu – pad enikeziwe 30 amashidi, kodwa pad 50-sheet Uyosebenza. Kuyinto differentiator the Bamboo Spark enkulu phezu kwezinye izinto zobuchwepheshe ezifana: iningi adinga iphepha okhethekile ukulandelela iminyakazo yakho.
Flick inkinobho on phansi kanye LED ibonisa green, ukuze ngikubikele ukuthi inamandla futhi lutho ilotshwe ekhasini. I LED uphendulela blue lapho pad ithole abanye ngokokudwebela okwesibhakabhaka elikhanyayo uma ipeni ethinta iphepha.
Kuyinto okuningi silula kunaleso izimbangi, okuyinto kokubili okuhle nokubi ngesilinganiso elinganayo.
Folio amvalele ukugcina leli phepha, ipeni, pad zobuchwepheshe evikelwe for the road. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
The kancane best wukuthi esibayeni uzizwa evamile, njenganoma yisiphi obungangenhloko kakhanjana sibakhulu. Kodwa futhi uzizwa kancane eshibhile, cap ipeni akusho ngaso sonke isikhathi uhlale phezu ukuphela uma lisetshenziswa futhi ungakwazi kuphela ukushintsha igobolondo obungangenhloko kakhanjana – ungeke ukwazi ukusebenzisa ipeni lakho ozithandayo.
Kuyihlazo kwazinhlanga uzizwe kancane nicer, okhiphé lesi kuyinto piece ezibizayo ubuchwepheshe.
Folio uzizwa wenza kahle, kodwa kuyinto ehluke bulky incwajana encane kangaka – futhi A5 kungaba ngempela zithothane inothi ukungenisa kanye nekudvweba. It has a ephaketheni encane ukushelela ngenxa esibayeni, aphethwe isiqeshana, ephaketheni ngoba amaphepha wachitha Emaphepha ukuyona magnetic ukuba azigcine endaweni.
Le nguqulo I ihlolwe kwaba namuphi Wacom ekubiza ngokuthi "ephaketheni igajethi", kodwa abanye abe isiqeshana tablet kanye nezinye nezinamathiselo okungase kube usizo nakakhulu abanye.
Ukubhala on the pad uzizwa yemvelo, kodwa omningi walo lonke elinye angaphezu angathola endleleni. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Ngoba ukuthatha amaphuzu abhaliwe uhlelo lusebenza kahle. Qeda ikhasi, hit inkinobho bese ukuvumelanisa nge lokusebenza. Ukusuka lapho ungakwazi okuthekelisa amanothi akho abhalwe ngesandla njengoba umbhalo usebenzisa ukuqashelwa ngesandla, njengoba isithombe JPG, njengoba PDF noma njengoba Wacom Ink Layer Ulimi (Will) ngiyofaka yokukhipha kwezinye izinhlelo zokusebenza ukuthi ukusekela digital inking yohlelo.
Uhlelo Bamboo Spark lokusebenza, okungenani Android, hhayi kakhulu kahle. Ungakwazi kuphela ukuthekelisa ikhasi elilodwa ngesikhathi, ezingasetshenziswa uthole kungakhungathekisa, kanye nokubhekelelwa umbhalo, kuyilapho kwalokho wamukelekile, Akukhona par izimbangi. It uvame wanginika gobbledygook ngisho ngoba nendlela yokubhala iyahluka yami neatest.
Izithombe nazo zithunyelwe Evernote njengoba okunamathiselwe, izithombe hhayi esishumekiwe, ne extension ".null" hhayi JPG, okusho ukuthi unayo ngesandla kabusha ukuze uthole it ukubonisa kahle futhi kabusha uyifaka inothi ukuze uthole it ukubonisa-line.
The amanothi zithunyelwa isithombe, kuhlanganise nathile upticks ongaziwa ekugcineni izinhlamvu, okuyinto ngokusobala ezinye ngomkhondo abahlubukayo of the esibayeni. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Esebenzisa pad A5 kunjani uthathelwe nanoma iyiphi enye, nje nge bulk kancane kusukela angaphezu ezisizungezile. Sketch by Cheryl Pilbeam. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Uhlelo isekela ingcindezi uzwela, kodwa iqiniso esilaziyo kuphela ihambisa nge kanzima noma ingcindezi medium. imigqa Light abayi wacosha, okwenza imidwebo emihle kancane hit and miss; umsebenzisi akazi noma imigqa kuyabonakala ekhasini bathunjwa ngokunembile noma cha.
Wokufiphaza ubuye kunalokho kanambambili. Uma umugqa iye wacosha, imigqa eminye phezu bamane kuholele block umbala, engesiyo njalo umphumela oyifunayo futhi ngokuqinisekile ayibonisi ukuthi yini ebonakalayo ekhasini.
Lines zilandelwa weqiniso, Nokho, uma ikhasi ayibashukumiseli, okusho ukuthi injengomoya iqonde noma agobile njengalokho isandla sakho ongaphatha. Kodwa ikhasi enza move, futhi kumelwe labetibambile phansi kungenjalo imivimbo yakho bayabanjwa out of line ne umdwebo, okungase kugcine lokudlela.
Isithombe esihanjisiwe sintula ngokucacile iningi lighter esibayeni imivimbo, kanti leli phepha linendlela sigudluke kancane ngenkathi drawing, okwenza eminye yemikhakha yobufakazi avele aphume endaweni. Sketch by Cheryl Pilbeam Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
I Wacom Bamboo Spark kubiza £ 103 nge noma ephaketheni igajethi, Umkhono we isibhebhe ezincane noma icala snap-fit i-iPad Air 2. Senziwa ezimbili cartridges ukuphindisela likayinki incwajana enamakhasi angu-30 of quality babempofu.
izinhlelo Ukuncintisana ezifana Livescribe Smartpen 3 Black Edition kubiza £ 120, kodwa zidinga iphepha okhethekile kokuqala ngezithuba zawo £ 3 for a incwajana kanye refills kubiza £ 1 ngasinye.
I Wacom Bamboo Spark kuyinto izici ezimbalwa nje kude ukuzidela okukhulu. Umqondo uwukuthi umsindo – ukwenza emuva pad smart ukuze ukwazi ukusebenzisa noma isiphi iphepha. Kodwa pad A5 ephansi, ihamba okubangela nezindaba for amanothi kanye nemidwebo kanye lokusebenza-side of ukuqhathwa, lapho wonke amanothi akho digital okwenziwa, Akukhona bhala.
Ngokungafani izimbangi akukho ukwazi komsindo, the ukuqashelwa ngesandla akulona best, kodwa ipeni, kuyilapho ozwa kancane eshibhile, eduze okuningi ekubeni ipeni evamile ukwedlula izimbangi kakhulu. Kuba njalo omunye izixazululo eshibhe ayatholakala futhi bekwazi okuthekelisa kuya digital inking format Wacom sika zingaba usizo kakhulu kulabo ngifuna ukuyisebenzisa okungaphezu nje notetaking.
Buhle: angasebenzisa noma iphepha A5, ehloniphekile lokubhala isipiliyoni, elula kuya ukugcina nokudlulisa inking, Wacom Ink Layer Ulimi ukuthekelisa
Bawo: pad encane, angaphezu okukhulu, ezishibhile-umuzwa ipeni, ikhasi uhamba, akukho ngokurekhoda izwi, uhlelo lokusebenza limited, timbiwa kungakhungathekisa
Paper Ukuqhathanisa okukhipha digital. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Livescribe Smartpen 3 Black Edition ukubuyekeza: the Pen 2.0
Ikhaya le-Google Max ukubuyekeza
Amazon Imemezela eBook Ukufaniswa Service
Apps, Isigaba, Gadgets, Ukuphila kanye nesitayela, Izibuyekezo, Samuel Gibbs, Technology, UK Technology
← Huawei uveza ikhasi 9 futhi ikhasi 9 Plus smartphone ukuze Thatha on iPhone and Galaxy Kulindeleke Iningi PlayStation 4 Imidlalo [RANKER] →